Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.4 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Aprilပြီလ 2020,9ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဆောင်း ဦး ရာသီပြissueနာ
Featured ဆောင်းပါး: Kamata, Kinema + ပျား၏မြို့တော်!
Shochiku Kinema Kamata ရုပ်ရှင်စတူဒီယို ၁၀၀ နှစ်မြောက်
"Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ထုတ်လုပ်သူ Shigemitsu Oka"
Shochiku Kinema Kamata Photo Studio (Kamata Photo Studio ဟုခေါ်သောစတူဒီယို) ကို Kamata တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ရှိခဲ့ပြီးတစ်ချိန်က City of Movies ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ဒီအမှတ်အသားအနေနဲ့ဒီနွေ ဦး မှာကျင်းပမယ့် Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအထူးစီမံကိန်းများစွာကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ Kamata သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကြောင့်ပင်ဤမြို့သည်သွက်လက်လာပြီးအရင်းအမြစ်မှာ Kamata Photo Studio ဖြစ်သည်။ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ထုတ်လုပ်သူ Shigemitsu OkaDaejeon ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၂၀၁၃ ပထမ နှစ်မှစ၍ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏စီမံကိန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ငါလမ်းလျှောက်ရင်း Kamata နဲ့ Shochiku တို့မှာအမှတ်တံဆိပ်ပါဝါကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်
"နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်အရင်ကအသိမိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကchairman္ဌ Kurihara (Yozo Kurihara) ကကျွန်တော့်ကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းမှာဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Ota Ward စက်မှုဇုန်မြှင့်တင်ရေးအသင်းမှကျင်းပသော Ota Business (AKINAI) ခရီးသွားပြပွဲတွင် Shoichi Ozawa သည်သူ၏စာသင်ချိန်တွင်အကြီးတန်းဖြစ်သောသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ Kamata ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့သူကအရမ်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သူ့ကိုယ်သူ Kamata March လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာငါတို့က "Kamata အကြောင်းပြောရမယ်၊ ဒါကရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ မင်းကိုမင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပစေချင်တယ်။ မင်းနဲ့ငါပူးပေါင်းပါ့မယ်။ " ထို့အပြင်စကားလုံးများ။ဒီကနေစပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပမှာပါ။ကံမကောင်းစွာဖြင့် Mr. Ozawa သည် ၂၀၁၃ မတိုင်မီနှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်သော်လည်းကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သို့သော် Takeshi Kato၊ ပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ် Bungakuza၊ Nobuyuki Onishi၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူနှင့် TBS ရေဒီယိုတို့ကြောင့် Mr. Ozawa နှင့်ဆက်စပ်သောလူအများစုရုံးလာခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ “ Shoichi Ozawa's Kokoro Ozawa” စီမံကိန်းကိုထုတ်လုပ်သူ Mr. Sakamoto ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးပွဲကိုအောင်မြင်စွာကြိုဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ "
အခုအချိန်ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကော။
"Shochiku နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ Mariko Okada, Kyoko Kagawa, Shima Iwashita, Ineko Arima, Chieko Baisho, Yoko Sugi ... ကျနော်တို့အတူတကွဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်။ ငါအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရခဲ့ပေမဲ့ ငါမျက်နှာပြင်မှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့မင်းသမီးကြီးနဲ့ငါဘာကြောင့်တူညီတဲ့စင်ပေါ်မှာပြောနေရတာလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ (ရယ်သံများ) ။ Mariko Okada ကိုဖျော်ဖြေဖို့ပြောတဲ့အခါသူက "ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ (Tokihiko Okada) ကစောင့်ရှောက်မှုခံယူခဲ့ကြတာပါ" Shochiku, ဒါကြောင့်ငါမထွက်နိုင်အောင်ထွက်မသွားနိုင်ဘူး။ "မင်းကပြောတယ်၊ ငါချက်ချင်းပဲသဘောတူလိုက်တယ်။ငါလမ်းလျှောက်ရင်း Kamata နဲ့ Shochiku မှာကြီးမားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပါဝါရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်မင်းသမီးများနှင့်မင်းသားဟောင်းများအပေါ်မင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်သင်ထင်ထားသည့်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ "
ဒီနှစ် Kamata Photo Studio ဖွင့်ပွဲရဲ့နှစ် ၁၀၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပေမယ့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်မလဲ။အထူးများကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
"နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Shochiku ရဲ့လက်ရာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားရမယ်။ အကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်ကာလတွေနဲ့အညီသတ်မှတ်ပြီးစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်လိုက်တယ်။ ၂၀၁၅ မှာစစ်ရဲ့ ၇၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စစ်ပွဲကသက်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Setsuko Hara ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမဖွင့်ခင်အိုလံပစ်နှင့်ပတ်သက်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြသထားတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Kamata Photo Studio 2015 ကဒီနှစ်ပတ်လည်အကြောင်းကိုစီစဉ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်၊ Corona ၏လွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအာရုံစိုက်ထားသောပြပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလစီစဉ်ထားသည့်အကြောင်းအရာမှလမ်းကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Shochiku ၏မူလအစတွင်ကျွန်ုပ်နှုတ်ဆိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Kamata စတူဒီယိုရှိသည့်အချိန်သည် ၁၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ မှန်သလောအချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်သည် ၁၂၀၀ လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်း ၉၀ ရာနှုန်းမှာအထက်ပါအသံတိတ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အသံတိတ်ရုပ်ရှင်၏ရွှေခေတ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်နေသည် Kamata စတူဒီယိုရှိစဉ်ကာလ။ "
Midori Sawato မှဒါရိုက်တာ Yasujiro Ozu မှ“ အဓိကမွေးဖွားခြင်းမှာ“ ကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းမွေးဖွားခဲ့သော်လည်းမွေးဖွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ” (ဒါရိုက်တာ Yasujiro Ozu) ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်နှင့် Ota Ward နှစ် ဦး စလုံးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော Mr. သူအကြိုက်ဆုံးဒါရိုက်တာ Yasujiro Ozu နှင့်သူသည် "(I Was Born, Butto") ကိုအထူးကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သင် Midori Sawato နှင့် Hairi Katagiri တို့နှင့်အတူတူပင်အလုပ်၌ပျော်မွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပြီး Akiko Sasaki နှင့် Vanilla Yamazaki Benshi ကိုထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်။ Benshi ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ချင်တယ်။ Benshi ဟာဂျပန်မှာသာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ "ဇာတ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှု" ဖြစ်သော Rakugo, Kodan, Ningyo Joruri, ထိုအချိန်ကကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည့် benshi သည် ၀ န်ကြီးချုပ်ထက်ပိုပြီးပေးဆပ်ခဲ့ရသည်ဟု benshi သို့လာရောက်သူများဖောက်သည်များစွာရှိပုံရသည်။ ဤရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အတူ, benshi နှင့်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ကားများသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နေကြသည်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါလည်းပျော်လိမ့်မယ်။ "
ငါမူကား၊ အကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းသို့ရောက်သော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းသို့ရောက်သော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားခြင်းသို့ရောက်သော်လည်း၊ ဒါပေမယ့်ငါမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့်ငါမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် "
"ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ Kamata စတူဒီယိုမှာရိုက်ထားတဲ့အသံတိတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုအများကြီးမထိခဲ့ဖူးဘူး။ " ငါက Ryomoto ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူရဲ့အမြင်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ "ဒါပေမယ့်ငါကလေးဘဝကတည်းကရုပ်ရှင်တွေကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်ကိုသာကြည့်ခဲ့တယ်။ မူလတန်းကျောင်းနဲ့အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကငါအများကြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းဒုတိယနှစ်တုန်းကငါကြိုက်တဲ့မင်းသမီး Mitzi Gaynor ကိုပန်ကာစာတစ်စောင်ရေးခဲ့တယ်။ , ပြီးတော့သူ့ဆီကနေကျွန်တော်ပြန်ကြားချက်ရခဲ့တယ်။ (ရယ်သံများ) ။ ငါဟာအရင်အလုပ်မှာအချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ရတဲ့ဥရောပမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနေရာတွေကိုကောင်းကောင်းသွားလေ့ရှိပြီးရုပ်ရှင်တွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်။ "
"ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားဖြစ်လာဖို့အိပ်မက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါရိုက်တာတစ်ယောက်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူမဟုတ်ဘဲသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲဝေဖန်သူတစ် ဦး ပါ။ " ငါအဲဒီတုန်းကဘာလုပ်ရမှန်းမသိလောက်အောင်စဉ်းစားနေတယ်။ Hideo Tsumura, Choji Yodogawa, Masahiro Ogi နှင့်အခြားသောရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများစွာ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မိဘများကိုပြောသောအခါ "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပါ၊ ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ၊ ဒါကြောင့်ရပ်တန့်။ "ဒါကြောင့်ကျွန်မမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ရခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရုပ်ရှင်တွေမှာပါ ၀ င်နိုင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး။ငါ့ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော် (ရယ်သံများ) မှာပါ ၀ င်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ Kurihara ကိုတိတ်တဆိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရုပ်ရှင်ရုံသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ရုပ်ရှင်သည်မြို့တစ်မြို့မှေးမှိန်သွားသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သော်လည်း Kamata ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုသည်ဂျပန်ရုပ်ရှင်များ၏ခေတ်မီမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သည်။ စစ်ပြီးနောက်၊ Shinjuku ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရုံများ Kamata သည်မြို့တော်ဖြစ်သည် ရုပ်ရှင် DNA ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံရှိတုန်းကရွှေခေတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးခဲ့တယ်၊ နောက်ရွှေရွှေခေတ်အတွင်းမှာရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာငါလာလည်ခဲ့တယ်။ မြို့တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ တတိယရာသီဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Kamata ကိုရုပ်ရှင်မြို့တော်အဖြစ်ပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။ "
“ ပွဲတော်ကိုငါသွားတိုင်းလူတွေကို“ ပျော်စရာကောင်းတယ်” ဒါမှမဟုတ်“ နောက်နှစ်ဘာလုပ်မလဲ” လို့လူတွေကိုပြောဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကဒေသခံတစ်ယောက်အနေနဲ့အမြစ်တွယ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်။ငါ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်။တကယ်တော့ Corona ရဲ့အခြေအနေအောက်မှာချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုကျွန်မစဉ်းစားနေပါတယ်။ YouTube ကိုအသုံးပြုပြီးအွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပရန်အစီအစဉ်လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုတင်ထားပြီးဖြစ်သည် (* အင်တာဗျူးသည့်အချိန်တွင်)ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာကျင်းပမယ့် benshi ရဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့ဟောပြောပွဲကိုပြသဖို့နေရာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကိုမျှော်လင့်ပါ။ဒီနှစ်ကခဏနားပြီး၊ အချိန်ကာလနဲ့အညီအွန်လိုင်းကိုပြောင်းချင်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခွန်အားရှိ သ၍ စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများ (ရယ်မောခြင်းများ) မှတဆင့်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားချင်ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ရုံရှိရန်ဆန္ဒရှိသည်။ Kinemakan လိုပါပဲသေးငယ်သည်မကအရေးမကြီးသော်လည်းသင်၏ပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီး Kamata ၏သမိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည့်နေရာတစ်ခုကျွန်ုပ်ရှိလိုသည်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဆက်လက်ကျင်းပစဉ်မစ္စတာအိုဇာဝါ၏အဓိပ္ပါယ်သည် Kamata သည်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ခေတ်သစ်ရုပ်ရှင်ရုံသည် Kamata မပါဘဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပြောခြင်းကချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ကမာတာသမိုင်းကိုလူအများစုသိစေချင်ပါတယ်။ "
ဝါကျ: Shoko Hamayasu
"လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံဆရာ Vanilla Yamazaki"
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၂၀ ခန့်က Benshi သည်ရုပ်ရှင်အားလှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံဟုခေါ်ဝေါ်သောခေတ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးထူးခြားသောဇာတ်ကြောင်းဖြင့်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်များတွင်အရောင်ဖြည့်သောအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။သို့သော်အသံနှင့်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏အခန်းကဏ္endကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။လက်ရှိတက်ကြွနေသော benshi တစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ရှားရှားပါးပါးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လင့်ကစားသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံဆရာ Vanilla Yamazaki ဟာ Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာစင်မြင့်ပေါ်တက်တော့မှာပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများအတွက် benshi တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုကျင်းပပါမည်။
Mr. Vanilla သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ က benshi ဖြစ်လာရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့ပုံရသည်။ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်အကြောင်းရင်းကိုပြောပြပေးပါ။
“ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ Employ Ice Age ကတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်ဘွဲ့ရခဲ့တုန်းကဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြထားတဲ့ Tokyo Kinema Club” ပြဇာတ်ရုံစားသောက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဘန်ရှီကိုစုဆောင်းဖို့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်။အကြောင်းပြချက်မှာဘင်ရှီသည်ကြည့်ရှုခြင်းသို့ရောက်သော်ဘာဖြစ်သည်ကိုမသိဘဲစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ငါအရင်ကအသံတိတ်ရုပ်ရှင်ကိုတစ်ခါမှမထိဖူးဘူး၊ ဗဟုသုတလည်းမရှိဘူး။ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ငါရုတ်တရက်ပွဲ ဦး ထွက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ "
ရုတ်တရက်ငါမသိသောကမ္ဘာသို့ခုန်။စကားမစပ် Benshi လောကဆိုတာဘာလဲ။သင်သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးသင်၏ဆရာ၊
“ ရာဂူဂိုနဲ့မတူတာကကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ဘန်ရှီအရေအတွက်အတိအကျကိုငါတို့မသိဘူး။ အခုတော့ဒါဇင်ခန့်လောက်ပဲရှိတယ်။ အရင်တုန်းကလိုင်စင်စနစ်ရှိခဲ့တယ်။ နည်းနည်းချင်းတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားတက်ကြွသူများစွာရှိနေသည်။ အချို့ကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ အချို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီးအချို့သည်သူတို့ဘာသာသူတို့စတင်ကြသည်။ Benshi ငါဇာတ်ညွှန်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားစဉ်ကတည်းကပုံပြင်ပြောခြင်းသည်လက်လျှော့လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ rakugo နဲ့ storytelling လိုမျိုး။ ဒါကြောင့်စတိုင်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးခေတ်သစ်လူတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နီးစပ်တယ်။ တချို့လူတွေကအဓိကအားဖြင့်လက်ရှိဘာသာစကားကိုသုံးပြီးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဇာတ်ညွှန်းထားကြတယ်။ ရိုက်ထည့်ပါ၊ ငါကသဘာဝအတိုင်းလုပ်ထားတဲ့မူရင်း benshi ကိုလုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လိုင်စင်စနစ်ရှိနေသေးရင်ငါမယုံဘူး (ရယ်တယ်) ။
vanilla စကားပြောတဲ့အခါ benshi တီးနေစဉ်မှာသူကစန္ဒရားနဲ့ Taishogoto ကစားနေတာကိုတွေ့ရတာစိတ်စွဲမှတ်စရာပါ။
"Benshi ဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးကစားနိုင်သူ၊ စကားပြောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ငါကတစ် ဦး တည်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Benshi ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းကိုရေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကစောစောမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာပဲ ... တကယ်တော့လျှို့ဝှက်ချက်အစား၊ ကျွန်တော့်အဖေကအဲဒါကိုရေးခိုင်းတယ်။ တခြား benshi က "ဒီဇာတ်ညွှန်းကကောင်းတယ်" လို့ငါ့ကိုချီးကျူးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါခံစားချက်တွေရောထွေးနေတယ်။ထိုအခါငါရုပ်ရှင်ဂီတကစားခြင်း၏စိတ်ကူးနှင့်အတူပေါ်လာ!သင်ကစားနေစဉ်တိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်ရရှိသော Taishogoto သည်ကျွန်ုပ်၏အဘွားကကျွန်ုပ်အတွက်အွန်လိုင်းဝယ်ယူသော်လည်းမသုံးခဲ့ပါ။အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်များကိုလည်းစန္ဒရားပေါ်တွင်တီးခတ်သည်။ "
"ကျွန်တော့်အမေကစန္ဒရားဆရာပဲ။ ဒါကြောင့်ငါလေးနှစ်အရွယ်မှာစန္ဒရားကိုလေ့လာနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် Taishogoto ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲသင်ယူခဲ့တယ်။ စင်ပေါ်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကစားပြီးတဲ့နောက်ငါသင်ယူဖို့ယဉ်ကျေးမှုစင်တာကိုအကြိမ်များစွာသွားခဲ့တယ်။ ဆရာကအံ့အားသင့်သွားသည်။ “ ကြိုးတွေနဲ့ကစားပုံကိုကျွန်တော်ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်” (ရယ်သံများ) "
"ergonomics ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့်အဖေကငါ့ကိုညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက် ဦး နှောက်ကိုတစ်ချိန်တည်းသုံးရင်ငါတစ်ချိန်တည်းမှာဆော့ကစားနိုင်ပြီးစကားပြောနိုင်သင့်တယ်၊ ငါကကလေးဘဝကတည်းကလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်" လို့ပြောခဲ့တယ်။ "ငါကြည့်တယ်!" ကိုသင်အကြံပြုပြီးပြီ။ငါအတော်လေးအဆင့်မြင့်တစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကတော့တခြားနည်းကိုသုံးလို့မရဘူး။ငါကားလိုင်စင်မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါစတင်ခဲ့ပြီးရပ်တန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးလို့မရဘူး၊ ရေကူးတာလည်းအရမ်းပျော်တယ်။ "
ယခုအချိန်တွင်ပေါ်လာမည့် Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌သင် Shochiku Kinema Kamata ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွင်ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ကားနှစ်ကားအကြောင်းပြောနိုင်လိမ့်မည်။
"ကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီး Ota Ward မှာနေခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါ Ota Ward မှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပွဲတက်ချင်ခဲ့တာပဲ။ Matsutake Kinema Kamata ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဟာအသံတိတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုအထူးပြုတဲ့စတူဒီယိုဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ငါဟာအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်။ slapstick ဟာသ! Yasujiro Ozu မှရိုက်ကူးသော Rushing Boy ဟုခေါ်သောနောက်ထပ်အလုပ်သည်လည်းတက်ကြွစွာရှိနေသော်လည်းအဓိကဇာတ်ကောင်၏ကလေးမှာရုပ်ရှင်၏အမည်အမှန်ဖြစ်သည်။ Tomio Aoki သည်ရုပ်ရှင်၏အမည်ကို "Rushing Boy" အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ \_ t ကြယ်ကြီးကြီးကလေး။စကားမစပ်, "Katsuben!" ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ၌ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Masayuki Suo မှဒါရိုက်တာ Ryo Narita၊ Benshi တက်တက်ကြွကြွခေတ်တွင်ရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်၊ Tomio Aoki အမည်ရှိဇာတ်ကောင်ကိုသူအပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်အပါအ ၀ င် Naoto Takenaka မှပါဝင်သည်။ ။ "
"ဖြောင့်မတ်သောယောက်ျားလေး" (၁၉၂၉) ကစားစရာရုပ်ရှင်ပြတိုက်© KAZNIKI
ဒီနှစ်ကျင်းပမယ့် Kamata ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအခြားဘင်ရှီတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။
"ဇာတ်ညွှန်းများ၊ လိုင်းများ၊ ဦး တည်ချက်များ၊ ဇာတ်ကြောင်းများ။ ဒြပ်စင်တိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် benshi ပေါ် မူတည်၍ အလုပ်အတူတူပင်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများရှိနိုင်သည်။ တိတ်ဆိတ်စွာသောရုပ်ရှင်များတွင်သူက" ငါသွားမယ်။ ရုပ်ရှင်ကိုနားထောင်ပါ။အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာသော benshi လောကတွင် ဦး ဆောင်သူ Mr. Midori Sawato သည်သံစုံတီးဝိုင်း၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေတင်ဆက်လိမ့်မည်။စကားမစပ်ဒီအချိန်မှာတော့ Straightforward Boy ဟာပါမောက္ခ Sawato ပြောတဲ့“ ငါမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့်မွေးဖွားခဲ့ပေမယ့်” (ဒါရိုက်တာ Yasujiro Ozu) မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ထို့အပြင် Akiko Sasaki သည် Torajiro Saito ညွှန်ကြားသည့်အခြားအလုပ်တွင်ပါဝင်လိမ့်မည်။မင်းကိုမင်းအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းတွေ့မြင်ချင်ပါတယ် "
နောက်တစ်နေ့တွင်စုရုံးလာကြသောကလေးများသည်ကျွန်ုပ်၏ဖျော်ဖြေမှုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသူတို့၏ဘင်ရှီကိုစင်မြင့်ပေါ်မှပြသမည်။ ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုသုံးနှစ်ခန့်အကြာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကလေးများကတတ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမမျှော်လင့်ဘဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာမို့ဘယ်လက်ရာမျိုးတွေမွေးလာမယ်ဆိုတာကိုငါတကယ်မျှော်လင့်နေတာပါပဲ။ တကယ်တော့ငါမှာသုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းငါတုပနေတယ် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စန္ဒရားတီးခြင်းကစားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာအနာဂတ်မှာ (ပြုံးရယ်) အလားအလာကောင်းပါတယ်။အလုပ်နှင့်ကလေးမွေးမြူရေးကိုဟန်ချက်ညီရန်ခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်၊ သို့သော်သင်၏အနာဂတ်အလားအလာများနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနိုင်ပါသလား။
"Mama-san Benshi ကိုစစ်အပြီးပထမလို့ပြောတယ်။ ဒါကအရမ်းခက်တယ်၊ ငါဟာနေ့စဉ်အလုပ်တွေမှာအလုပ်များနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါကစင်ပေါ်မှာရပ်ချင်နေတုန်းပဲ။ Kamata ကိုဖိတ်ကြားခံရတုန်းက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Shochiku Kamata ရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာပြီးတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Kamata အကြောင်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ပုံတွေရေးလေ့ရှိတယ်။ လှုပ်ရှားမှုဓာတ်ပုံများနှင့် benshi နှင့်ဆက်စပ်သောနိဒါန်းဗီဒီယို "Activity Photo Imamukashi" ကိုပြသသည်။ ဂီတနှင့်ဇာတ်ကြောင်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းစတိုင်လ်၊ သို့သော် Kamata ၏သမိုင်းကိုထိုနည်းဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင်လျှင်ကောင်းပါလိမ့်မည်။ Ota Ward သည် Kamata ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ သက်ရှိယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်များကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ Benshi သည်ဖျော်ဖြေသူနှင့်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး အဖြစ်အထူးရာထူးနေရာဖြစ်သည်။ စင်တာအစားစင်မြင့်၏အစွန်းတွင်ရပ်တည်နေသောအလုပ်အကိုင်။ ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္aသည်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်ကသမိုင်းနောက်ခံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ အနုပညာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အသံတိတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်။ လူတော်တော်များများကသူတို့မေ့မထားနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုနှစ်သက်ချင်ကြတယ်။ တစ် ဦး benshi ၏တည်ရှိမှုနှင့်မျက်နှာပြင်မှရေးဆွဲနေကြသည်။ "
ဘန်ရှီ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်အသံတိတ်ရုပ်ရှင်ရုံစားသောက်ဆိုင်ရှိ Tokyo Kinema Club တွင်ထိုင်။ benshi အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ "ဟီလီယမ်အသံ" ဟုခေါ်သည့်ထူးခြားသောအသံနှင့် Taishogoto နှင့်စန္ဒရားတီးခတ်သည့်ထူးခြားသောအနုပညာစတိုင်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Masayuki Suo "Talking the Pictures!" 』ပေါ်လာသည်။အသံသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာ Doraemon မှာ Jaiko ရဲ့အခန်းကဏ္ including အပါအ ၀ င်အလုပ်များစွာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။
အနုပညာနေရာ + ပျား!
"ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင် Takashi Nakajima"
Senzokuike သည် Ota Ward ၏နေထိုင်သူများနှင့်ရပ်ကွက်ကိုကိုယ်စားပြုသောကျော်ကြားသောနေရာနှင့်သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။Senzokuike တွင်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရှင် Takashi Nakajima ၏ "Water & Wind Lights" အနုပညာအစီအစဉ်ကို "Machinie Wokaku * 1" ၏ OTA အနုပညာစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ယခုနှစ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။Mr. Nakajima ကို Senzokuike အကြောင်း၊ ဤလုပ်ငန်းနှင့်နေရာနှင့် Ota Ward အကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။
မင်း Ota ရပ်ကွက်ကမဟုတ်ဘူးလား။
"ဟုတ်တယ်၊ အိုမားကူမင်း Minamisenzoku ပါ။ Senzokuike မူလတန်းကျောင်းကပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက Senzokuike ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။ မွေးလာကတည်းက Ota-ku မှာနေတယ်"
သင် Ota ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ Ota Ward ၏ဆွဲဆောင်မှုသည်အဘယ်နည်း။
"သူတို့တော်တော်များများ (ရယ်မောသံများ) ။ ဒါကမြို့လယ်ခေါင်ကသိပ်မဝေးပါဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်တဲ့ Senzokuike၊ Tama မြစ်၊ Peace Park နဲ့ Wild Bird Park"
၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောမြို့ဖြစ်ပြီး Denenchofu နှင့်မြို့စက်ရုံတစ်ရုံရှိသည်။တကယ်တော့ကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာကြွယ်ဝတဲ့ကျောက်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ မြို့လယ်မှာရှိတဲ့စျေးဝယ်လမ်းတွေ၊ ရန်ချမင်းတွေလိုသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။လူအမျိုးမျိုးတို့၏ဘဝအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းလူနေမှုအဆင့်အတန်းကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဆွေများသည်များသောအားဖြင့်အတူတကွကစားလေ့ရှိကြသည်။ဒီမြို့မှာကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတာဝမ်းသာပါတယ်
တကယ်တော့ဟဲန်ဒါလေဆိပ်နဲ့ပြည်ပကိုသွားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ တိုကျိုကိုသွားတဲ့တံခါးလားမဟုတ်လား။ "
အဘယ်ကြောင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာတွင်ဖော်ပြချက် *2ကိုဖော်ပြခဲ့သနည်း။
"ကျွန်မပထမပိုင်းမှာဆွဲနေတုန်းပါ။ ဒါပေမယ့်ကျောင်းဝင်းရဲ့စတုရန်းဘောင်အတွင်းမှာလိုက်ဖက်တဲ့ပုံကိုဘာကြောင့်ဆွဲရတာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တယ်။ ပတ်ပတ်လည်ဘောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အစွန်အဖျားကျဉ်းနေတယ်။ ငါပုံတွေဆွဲလာတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတယ်၊ ပြီးတော့ငါထူးဆန်းတဲ့ amoeba ပုံသဏ္inာန်ကိုဆွဲနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာကျတော့အဲဒါကိုဘောင်ထဲမှာထည့်ထားရတယ်။
အခြားသူများ၏ရှုထောင့်နှစ်ခုရှုထောင့်များကိုကြည့်သောအခါငါမကြာခဏလုပ်သောအရာမှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲအလုပ်ထဲဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ "ဒီပုံကိုမင်းရိုက်လိုက်ရင်မင်းဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ" လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ထို့နောက်ငါသဘောပေါက်သည်မှာပန်းချီကိုယ်နှိုက်သည်အာကာသထဲတွင်ပြန့်နှံ့သွားလျှင်၊ ပန်းချီဟုခေါ်သောရှုထောင့် ၂ ဖက်မြင်အလုပ်ထက်ငါလူတိုင်းကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်သည့်ကမ္ဘာကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်ဟုထင်သည်။အဲ့ဒါကငါ installation လုပ်တဲ့ expression method ကိုငါပေါ်လာတယ်။ "
ပန်းချီကားများတွင်ကြည့်ရမည့်နေရာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးအလင်းကိုအိမ်တွင်းပြုသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေတွင်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလုပ်များစွာရှိပြီးအလင်းရောင်သည်နေရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ နံနက်ယံ၌နေရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ မီး၏အနေအထားသည်တောင်တက်ခြင်းမှနစ်မြှုပ်ခြင်းအထိတစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်၏အသွင်အပြင်သည်အလင်း၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်အိမ်ပြင်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း၏ပျော်စရာဖြစ်သည်။ လေထန်သောနေ့၌ပင်ထိုအရပ်၌ရှိပါက မိုးရွာတဲ့နေ့တွေ၊ နေသာတဲ့နေ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလုပ်တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကွဲပြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုအမြဲတွေ့နိုင်တယ်။ တပ်ဆင်မှုကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုသင်ခံစားရတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကော။ ငါ့ကိုမေးရင်ငါလုပ်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါ့ကိုအလုပ်လုပ်ဘို့အဘို့အအသိ။
ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါပွင့်လင်း, အရောင်မရှိအရာဝတ္ထု = stretch film *3ကိုအသုံးပြုသည်။တပ်ဆင်ရန်နေရာသည်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေရာကိုမသတ်ဖြတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုထိုနေရာတွင်ကောင်းစွာအသုံးပြုခွင့်ပြုသည့်အလုပ်တစ်ခုကိုရည်မှန်းထားသည်။ "
《 ရည်မှန်းချက်ခြားနားချက် 2019 (3331) Arts Chiyoda XNUMX
မစ္စတာ Nakajima ရဲ့အလုပ်တော်တော်များများဟာဒီတစ်ခေါက်ထက်ပိုတဲ့ stretch films တွေကိုသုံးတယ်။
"ကျွန်တော်တပ်ဆင်တာကသဘာဝအလင်း၊ လေနဲ့လေတွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်။ မိုးနဲ့လေဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော့်အတွေးတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေတယ်။ ။
ဒီအလုပ် "ရေနှင့်လေ Hikari" အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား။
"ဒါဟာ Senzokuike နဲ့ boathouse ကို stretch film နဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ့်အလုပ်ပဲ။ ငါက boathouse ခေါင်မိုးကနေကန်ကန်ဆီကိုပြန့်ကျဲသွားမယ်။ လေတိုက်တဲ့အခါလေသံနဲ့ဆူညံသံတွေထွက်လာတယ်။ " မိုးရွာသည့်အခါ stretch film ကိုအပြောက်အစက်များဖြင့်မှတ်သားထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မိုးအုံ့၊ ပူသောစိုစွတ်သောနေ့များနှင့်ထိုနေ့၌ဖြစ်ပျက်သောသဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းက Senzokuike အနီးမှာနေတာကြာပြီလို့မင်းပြောခဲ့တာဟာ Mr. Nakajima အတွက် Senzokuike ဘယ်နေရာလဲ။
နွေ ဦး ရာသီသည်ရာသီဥတုကိုခံစားနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ Sakurayama တွင်ချယ်ရီပန်းပွင့်များကြည့်ရှုခြင်း၊ Sanrenbashi ရှိနွေရာသီညနေခင်း Hibiki ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ၊ နွေရာသီတွင်“ Firefly Evening” နှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီ Senzoku Hachiman ဘုန်းကြီးကျောင်းများကဲ့သို့သောပွဲများဖြစ်သည်။ကျွန်မကျောင်းသားဘဝတုန်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရယ်မိခဲ့တယ်။သင်မှီဝဲလာသောအခါသို့မဟုတ်အနည်းငယ်စိတ်သက်သာရာရလိုသောအခါ၎င်းသည်ညအချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ နံနက်အချိန်၌ဖြစ်စေစက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာခြင်းနှင့်ရေကန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤရောဂါကိုကုသနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ "
"ဟုတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်တစ်နေ့နေ့မှာ Senzokuike မှာကျွန်တော့်လက်ရာတွေကိုပြနိုင်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ "
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Ota Ward ရှိလူတိုင်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့နိူင်ပါသလား။
"ဟုတ်တယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီး Senzokuike မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ရတာသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ငါ့အလုပ်က Senzokuike ကိုအခြားရှုထောင့်ကနေကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းငါလည်းပျော်ရွှင်မိမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးကျွန်တော့်ခေါင်းထဲထောင့်ကနေလာပြီး၊ နောင်အနာဂတ်မှာ“ ပိုပြီးတော့ကျော်ကြားလာမှာပါ၊ “ အိုး၊ အဲဒီလူ” လို့ခင်ဗျားထင်လိမ့်မယ်။ (အရမ်းရယ်ရတယ်)။ "
မစ္စတာ Nakajima အားဖြင့်အလုပ်ပုံကြမ်း
* 1 OTA အနုပညာစီမံကိန်း "Machinie Wokaku":
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာအပေါ်ဗဟိုပြုစီမံကိန်း။Ota Ward ၏ပြူတင်းပေါက်ကိုအနုပညာပြခန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီးအနုပညာအမျိုးမျိုးကို gusset တွင်ပြသပြီး၎င်းသည်မည်သူမဆိုအနုပညာကိုလွယ်ကူစွာနှင့်အလွယ်တကူတန်ဖိုးထားနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။သင်သည်အနုပညာကိုတွေ့နိုင်သည့်လှပသော gusset တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်ကွက်ရှိနေထိုင်သူများ၏မတူကွဲပြားသည့်ဗေဒဆိုင်ရာအသိနှင့်ဂုဏ်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကလေးများ၏ဖန်တီးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
* ၂ တပ်ဆင်မှု -
*3Stretch ရုပ်ရှင်:
၁၉၉၄ ဓာတ်ပုံပညာဘွဲ့လွန် Kuwasawa Design School မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်
၂၀၀၁ ဘာလင်တွင်နေထိုင်သည်။ ဂျာမနီ
၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆ Mizuken သတိရအောက်မေ့ပွဲယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်ပုံငွေ
၂၀၂၀ ဖလှယ်မှုပုံစံ <exchange form> / SHIBAURA HOUSE, တိုကျို
2017 နေ့စဉ်ပရိယာယ်များ / ပြခန်း PLACE TOKIO, တိုကျို
2015 Kikusuru: အသိပညာမြို့တော်ပွဲတော် / Grand Front Osaka, Osaka
Group Exhibition 2019 Iron Works Island Festival တိုကျို၊ "IRON ISLAND FES" Keihinjima
2019 Zou-no-hana Terrace ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပြပွဲ "Futurescape Project", Yokohama
2017 ပုံပြင်သည်ဓာတ်ပုံနှင့်စကားလုံးများကိုရောစပ်။ Ota City ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်၊ Gunma နှင့်စတင်သည်